Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Popular Jewelry
Iwe unogadzira tsika yakagadzirirwa zvishongo?
Ehe, tinodaro. Isu tinoshandisa zvinhu zvemhando yepamusoro. Isu tanga tichishanda nevatengi vedu kugadzira uye kugadzira akasiyana akasarudzika zvidimbu kweanosvika makore makumi matatu.
Tsvaga zvimwe nezvetsika yakagadzirwa zvishongo paVakakurumbira.
Ndingaenda sei pamusoro pekuteedzera seti ye grill kana goridhe mazino?
Yakagadzirira mamwe mafoni? Mu NYC Iwe unogona kushanyira yedu yakatsaurirwa peji kuti udzidze zvakawanda nezvekuita-inogadzirwa-grill:
Tsvaga zvimwe nezvetsika yakagadzirirwa-ku-kurongeka grill pa Popular Jewelry.
Saizi yangu yakadii?
Kuti uwane zano rekuti zvishongo zvacho zvingaenderane sei, ungatarisa aya masitaidhi emhando dzakasiyana dzezvishongo:
Bracelets - Sizing Gwaro reWristwear (& Anklets futi!)
Mitsipa - Kusarudza yakanakira mutsipa wako
Mapenduru - Kusarudza yakakodzera saizi chikamu pamutsipa wako
Mhete - Kusarudza yakakodzera saizi yechindori
Unogamuchira makadhi echikwereti here?
Ehe, tinogamuchira ese makuru makadhi echikwereti anosanganisira Visa, MasterCard, American Express uye Discover. Mukuwedzera isu tinogamuchira Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay, PayPal, uye kunyange Bitcoin. Uye kana iwe uchifungawo, isu zvakare tinogamuchira yakanaka o 'fashoni, inotonhora yakaoma mari. (Ndokumbirawo usatumira tsamba kwatiri.)
Ndedzipi dzimwe nzira dzekubhadhara dzaunadzo?
Isu tinobvuma nzira dzakasiyana dzekubhadhara dzakadai sePayPal Checkout, iyo inobvumidza iwe kubhadhara maodha ako muchitoro chedu chepamhepo uye muchitoro chedu. Pamusoro pezvo, tinogamuchira NFC (Pedyo neMunda Kutaurirana) nhare dzekubhadhara dzakadai seApple Pay, Android Play uye Samsung Play. Isu tinopawo vatengi vedu sarudzo yekubhadhara nemakadhi akawanda kana musanganiswa wenzira dzekubhadhara dzekutenga-muchitoro. Isu tinobvumawo waya webhangi, cheki / cheki cheki, uye maodha emari. Yekuwedzera yekubhadhara nguva yekugadzirisa inoshanda kune idzi nzira dzekubhadhara. Uye zvakare, kubhadhara kunofanirwa kujekesa zvigadzirwa zvisati zvasunungurwa kana kutumirwa kumutengi.
Iwe unopa here hurongwa husingaonekwe?
Ehe tinodaro. Zvirongwa zvedu zvinogadzikana zvekugadzika kubva pavhiki kusvika pamwedzi kubhadhara. Kana iwe uchida nguva yekubhadhara yakagadzirirwa, ndapota taura nesu.
Unopa mari here?
Kusimbisa! (pun yakagadzirirwa) Tinotenda kuti zvishongo hazvifanirwe kuve zvisingawaniki. Nekukosha kwegoridhe pakukwira nguva dzose, isu tinogara tichitsvaga nzira dzekuita kuti zvishongo zvedu zvakanaka zvikwanise kubhadhara munhu wese. Kunze kwehurongwa hwedu hwekugadzika zvinhu, kutenga kunoitwa online kunogona kuwana mari kuburikidza Simbisa uye Paypal Chikwereti. Kana uchinge watenderwa mutsara wechikwereti, unogona kutarisa nezvechitoro chedu chepa online sezvaungaita iwe uye sarudzo dzemari dzinozounzwa kwauri. NePayPal chikwereti iwe unongosarudza PayPal uye shandisa yavo yakatenderwa mutsara chikwereti mushure mekubhara.
Nguva yangu ichauya rini?
Sekambani inodada yakatangwa & yakavakirwa muNew York, tinoziva kuti vatengi vedu havawanzo kupa nguva yakawanda kubva kumarongedzo avo akarongedzwa kushopu kuchitoro chedu. Panguva imwecheteyo, tinoziva kuti ivo vangade mukana wekuita kudaro chero kwavanenge vari, uye nepamusorosoro mukana. Ndosaka tichivavarira kupa kurongeka kwekugadzirisa nekukasira sezvingaite sevanhu- kazhinji, maodha ane akagadzirira kupfeka zvinhu zviri mudura anotumira kunze nezuva rimwe chete rebhizinesi. Kune avo vane kunetsekana kwakanyanya nezve izvo zvipo zvekupedzisira-miniti, isu tinopa rakafanana-zuva kuendesa munzvimbo yeGreater New York City nzvimbo (kuburikidza needu-anodiwa ekuendesa vadyidzani UberRUSH uye Vanotumira.)
Kuti uwane rumwe ruzivo rundown pane zvekuendesa, iwe unogona kuona yedu yekutumira mutemo pano.
Ndinofanira kutarisira sei zvishongo zvangu?
Zvese zvakashongedzwa zvishongo zvinotengwa kubva Mukurumbira huya nehupenyu hwekuwedzera hunyanzvi hwekushongedza jewelry. Tinokurudzira kuve nekupfava zvine musoro pazvishongo zvako sezvazvinogona. Muzhinji, kushandisa mvura inodziya uye nesipo nyoro kunokwana kushambidza zvishongo zvako.
Dzvanya apa kuti uwane yakadzama gwara nezve yakanakisa jewelry zvishongedzo.
Unogadzirisa zvishongo here?
Ehe, tinodaro. Isu tinopa ekugadzirisa masevhisi egoridhe nesirivha zvishongo zvidimbu. Iwe unongoda kuunza chidimbu chako chakakanganisika kuchitoro chedu uye tichaita zvatinogona kuti tigadzirise nekukurumidza sezvazvinogona. Nekuda kwehuwandu hwehuwandu hwebasa, ndapota tendera kanenge 1-2 maawa ekumirira nguva yezuva rimwechete zvishongo zvekugadzirisa basa kana zvichikodzera. Nguva dzekupedzisa Jobho dzinoenderana nekuoma kwebasa.
Unogadzirisa wachi here?
Ehe tinodaro. Isu tinopa yakazara suite yevhisi masevhisi kubva kunochinja mabheti ekuchinjira kumachina mafambiro ekugadzirisa / kugadzirisa. Inzwa wakasununguka kuunza yako yakakosha wachi kuchitoro chedu kuti chiongororwe uye Quote. Ichave iri mumawoko akanaka.
Zvekutenga zvakagadzirwa munyama mu-chengetedza zvedu Mune-Chitoro Dzosera Policy inoshanda iyo yakanyorwawo pane irisiti yekutenga:
Kungochinjanisa kunowanzobvumidzwa uye kunofanirwa kuitirwa mukati memazuva manomwe ekutenga.
Nezve zvinotengwa zvakagadzirwa pane yedu-yechitoro chitoro, yedu Online Return Policy inoshanda. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve mutemo wedu wekudzoka ndapota shanyira edu Kutumira & Kudzorera Policy peji.